Uma ushonelwe passport yakho, yini okufanele ngiyenze? umbuzo okunjalo kungaba ngokuvamile ukuzwa noma ukufunda ku-intanethi. Lona mbhalo eziyisisekelo noma yisiphi isakhamuzi, inikeza okuningi amalungelo kanye nesazisi. Futhi ngaphandle kwakhe akunakwenzeka. Ngakho, uma ulahlekelwe passport yakho, kumelwe ukulungele nobunzima kule nqubo ye yokutakula. Kuyinto efiselekayo ukuthatha izinyathelo ngokushesha ngangokunokwenzeka. Phela, afike ezandleni izigebengu, okuyinto nakanjani ungaphuthelwa wakhe, thatha, isibonelo, yibhange imali egameni lakho. Futhi ukuphila esimweni umthetho ngaphandle le dokhumenti ngeke kube nzima.
Okokuqala, ulahlekelwa passport yakho, omunye kumelwe sikhumbule izimo Kwakuthi ngaphansi kwazo. Lapho wayesehambile, lapho ncamashi, endaweni ephithizelayo noma eyihlane, ukuthi umuntu yayo ukuthola nokunye. Uma uqiniseka - amathuba ukuthi umuntu wakhe uzothola futhi ukusizakala ngabo lincane kakhulu, wena umane ukuya FMS iyunithi eliseduze. Ukuze idokhumenti elingekho lapho kuyomelwe ukuba ngikhokhe inhlawulo, khona-ke uzakubonisisa bhala amazwi angase ashiwo ukukubuyisela esisha. Uma siphendukela Federal Migration Izikhungo endaweni yokuhlala, kuba ngezinsuku eziyishumi isivele kungenzeka uthole izandla zakho phezu brand passport. Endabeni ngokubhala izitatimende iyunithi ezahlukene, kuzodingeka silinde okungenani izinyanga ezimbili. Sonke lesi sikhathi idatha ngeke ihlolwe futhi nokulungisa amaphepha.
Uma ushonelwe passport yakho endaweni ecinene, yini okufanele uyenze? Umbuzo omuhle. Abanye abantu bakhetha ukubhala imilayezo isicelo wezakhamuzi futhi abazi ukuphendula bese ubuyela idokhumenti. Lesi sinqumo lingakubulala kahle. Ngenxa yezizathu ezihlukahlukene, umuntu etholakele passport yakho, abakwazanga ngisho ukubona isikhangiso isibonelo, kudlule kuye noma uhlala endaweni ehluke ngokuphelele futhi angaphinde abuyele kule ndawo. Ngaphezu kwalokho, i-ukwenzé ngokwethembeka isihloko kuba umuntu singenakwenzeka uzokuphendula. Futhi udumo wathatha kwengobe - akusiwona into embi. Ungenza ngisho iphasiphothi yakho noma icala lobugebengu ukukhipha usuku olulodwa amafemu.
Indlela engcono kakhulu, uma passport elahlekile - banxuse umhloli wesifunda noma Umnyango wamaphoyisa eliseduze endaweni lapho uhlala khona. Kuleyo ngosi uyothola ukutshela mayelana nokulahlekelwa, futhi bhala amazwi angase ashiwo idokhumenti lalahleka ngaphansi kwezimo engaziwa. Imane Kumele wamukele. Uma amaphoyisa senqabe leli, baphikelele. Isitatimende ibhalisiwe futhi uthole izandla zakho phezu leli khadi. Kufanele kugcinwe ukuze bazivikele imikhonyovu kungenzeka izenzo, wanquma ukusizakala passport yakho. Njengoba nje ikhadi kuyoba ezandleni zakho, ngeke obhekene idokhumenti elahlekile. Uma isitifiketi ukulahlekelwa ipasipoti ungenayo, kungenzeka-ke ukuthi maduze "injabulo" umyalezo ovela intela noma imali ebhange.
Ngemva kwesikhashana, ikheli lakho uzothola impendulo, ukwenqaba ukuya noma uvumela icala lobugebengu.
Uma kwakuba khona ukulahlekelwa passport we Russian Federation, kodwa wena nize ukwehluleka, kanye kubalulekile ukuya MBF efanayo. Lapho, kufanele athenge iqoqo amafomu ukubuyisela imibhalo. Gcwalisa kubo lula ngokwanele, nakuba ekuqaleni wayengacabangi kanjalo. Kuyadingeka ukuba banake izibonelo, alengiswa ezindongeni. I izifanekiso thereunto memorandamu achazayo, uzilungiselele kunoma yiluphi uhlobo, kanye isicelo sokubuyiselwa idokhumenti, eqinisekisiwe yinhloko ehhovisi iphasiphothi. Sokuvuselela passport kuyodingeka bakhokhe ruble 150 e igatsha eliseduze of Sberbank.
Ilindele passport kumelwe zisebenze ikheli inkonzo indawo yakho yokuhlala ukuthola isitifiketi khona mina. Lokhu kwenziwa ngesisekelo nanoma yimiphi eminye imiqulu ezifakazela ukuthi ubuwena.
Ukuze ube umnikazi-passport, udinga ukuqoqa eziningi amaphepha ahlukene: isitifiketi sokuqashwa, incwadzi yekusebentela, benze ikhophi yaleli sekhadi, isitifiketi sokuzalwa, izithombe usayizi othile, njalo njalo. Sizoba ukuba ube nesineke.
Ngakho, uma i-passport elahlekile, umuntu akufanele kube nzima, kungcono ukuthatha isinyathelo ngokushesha.
Ngobani izindlalifa esigabeni sokuqala?
Kanjani ukuze uthole ehhovisi abangasebenzi?
Isamba semali lapho ezalwa: imibhalo, usayizi
Indlela ibhalansi ekunqabeni: izici, futhi isibonelo ifomula
Indlela yokwenza kahle i-enema kunoma yisiphi isimo.
Recipe ukulungiselela kanye nokwakheka ayinhlama